ORBEL-ODÜ İşbirliği Protokolü İmzalandı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Borotokoollada iskaashiga ORBEL-ODU ayaa la saxeexay
15 / 10 / 2019 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
hanaanka wadashaqaynta orbel waaba la saxeexay
Iskuduwaha Hawada iyo Mashruuca Tababbarka Üniversitesi ee Çambaşı Xarunta Dabeecadaha Protokolü waxaa saxeexay inta u dhaxeysa Jaamacadda Ordu iyo Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu.
Si loo suurtogeliyo waxbarashada iyo waxqabadka bulshada ee shaqaalaha Jaamacadda iyo ardayda wax ka barata waaxaha la xiriira iyo barnaamijyada Çambaşı Doşıa Facilities oo ay maamusho Orbel A.Ş. Prof. Hahim Güler iyo kuxigeenka madaxa jaamacada. Dr. Cali Akdoğan wuxuu saxeexay borotokool iskaashi.
Rector Dr. Cali Akdoğan wuxuu yiri, “Jaamacada Ordu, waxaan muhiimad weyn u leenahay isbadalka aqoonta aragtiga ah ee aan ku kasbaday ardaydeena iyo horumarka dhaqan-dhaqaale ee ardaydeena iyadoo loo marayo howlaha waxbarasho ee aan ka fulinno hay'addeena. Xaaladda guud ee jirta, waxaan gaarnay tusaale la taaban karo oo ku saabsan dadaalkeenna iskaashiga jaamacadeed ee dadweynaha iyo is-dhex-galka jaamacadda magaalada oo aan la saxiixnay borotokoolkii aan maanta kala saxeexnay Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu iyo Jaamacadeena. Macnaha guud, waxaan u fidinay xarun shaqaalahayaga iyo ardayda Çambaşı Doğa Facilities jaamacadeena. Waxaan rajeyneynaa iskaashigeenna inuu faa iido u yeesho isagoo ka wakiil ah labada hay'adood. Waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo Mehmet Hilmi Güler taageeradiisa uu siiyay Jaamacaddeena. ”
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, "Iskuxirka magaalada ee jaamacada dhexdeeda marka loo eego baaxadda wadashaqaynteena iyada oo qayb ka ah Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu Çambaşı Xarunta Dabeecadda, waxaan saxeexnay borotokoolka xarunta bulshada ee aan u fidinayno adeegga Jaamacadda Ordu, waxaan rajeynayaa inaan labada faa iido ka helo."
Iyadoo la raacayo borotokoolka la saxiixay, Rector Akdoğan, gudoomiyaha ciidamada Seddar Yavuz iyo Duqa Magaalada Ordu. Mehmet Hilmi Güler wuxuu ka qeybgalay xaflad lagu aasay geedka geedaha Çambaşı Ciyaaraha Jiilaalka iyo Xarunta Ski.
Barnaamijka kadib, Rector Akdoğan wuxuu baaritaano ka sameeyay xarun bulsheed oo loo qoondeeyay Jaamacada Ordu kadibna wuxuu ku booqday Xarunta 'şıambaşı Ski Center oo uu booqday Orbel A.Ş. Maareeyaha guud Muhammet Günaydın.
Ilityambaşı Xarunta Dabeecadda
Borotokoolka iskaashiga ORBEL-ODU